Home Cayaaraha Florentino Perez oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay, in kooxdiisu ay...
Florentino Perez oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay, in kooxdiisu ay ku Guul-darraysatay saxiixa Erling Haaland
Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay, in kooxdiisu ay ku guul-darraysatay saxeexa Erling Haaland oo ay la wareegtay Manchester City, waxaanu sababta ku sheegay Karim Benzema.
Real Madrid ayaa ku jirtay tartanka Haaland oo 21 jir ah oo ay doonayeen in ay kala soo wareegaan Borussia Dortmund, hase yeeshee waxay mar dambe ka baxeen tartankaas iyaga oo u jeedsaday d hinaca weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe, taas oo fursad usiisay Manchester City inay si fudud ula saxeexato Erling Haaland.
Qorshihii Real Madrid ee ahaa inay la saxeexato Mbappe ayaa burburay markii uu laacibkani doortay inuu sii joogo PSG, taas oo Real Madrid dhigtay weeraryahano la’aan oo kaliya Karim Benzema uu xilli-ciyaareedka dambena hoggaamin doono afkooda hore.
Laakiin Florentino Perez ayaa waxa uu ku adkaystay in uu ku faraxsan yahay sida ay wax u dhaceen sababtoo ah Karim Benzema oo ah ciyaartoyga ugu cadcad ku guuleysiga Ballon d’Or ayay haystaan.
Waxa uu sidoo kale Perez sheegay, in Erling Haaland aanu boos ka heleen Real Madrid oo uu kursiga kaydka u fadhiyi lahaa Benzema.
Waraysi uu siiyey warbaahinta El Chringuito ayuu ku yidhi: “Mbappe heshiiskiisu wax dhibaato ah kuma abuurin Haaland. Waxa aanu haysanaa Benzema, markaa suurtogal ma aanay noqonayn in aanu wada haysano isaga iyo Karim.
“Lama aanaan saxeexan karayn Haaland si uu kursiga kaydka u fadhiisto. Haaland waa ciyaartoy cajiib ah iyo weeraryahan heersare ah.”
Previous articleDagaalka Ukraine: Diyaaradaha Dagaalka ee Ruushka iyo NATO oo hawada Yurub isaga hor yimid
Next articleKooxda kubadda cagta Liverpool oo shaacinaysa saxeexii saddexaad ee ay xagaagan samayso
Madaxweynaha Ruushka Oo Ku Dhawaaqay In Uu Gantaallo Nukliyeer Ku Rakibanayo...
Dabageed oo baxsad u ah Beledweyne kadib markii aay ka soo...